Iindaba - I-Arden Router bits
Ifowuni: +86 757 2733 7134
Ukubona iBlade yokusika iinkuni
Wabona iBlade Ukusika i-Acrylic
Isarha ukusika iAluminiyam
Saw Blade Ukusika iCalcium Silicate Plate
Umsiki wokudibanisa iminwe
umatshini wesakhelo sefoto
umgca wokuveliswa kwelog
I-Arden Router bits
Isixhobo sokuphatha izilumkiso:
1. Izixhobo zeArden ziyilelwe abasebenzisi abaziingcali besebenzisa izixhobo ezahlukeneyo zezixhobo ezahlukileyo, ubukhulu becala zahlulwe zangamacandelo amahlanu: i-chipboard, i-MDF, iinkuni eziqinileyo, iPlexiglass kunye nelitye eliyinyani, abasebenzisi abaziingcali ngokwemiba eyahlukeneyo bakhetha isixhobo esahlukileyo, ukuze bafezekise Isiphumo esihle kunye nokuzinzileyo kokusika, kuthintela isixhobo koxinzelelo ukuba lwaphule, zonke izixhobo zenzelwe ukujikeleza ngokujikeleza iwotshi.
2. Zonke izixhobo ngexesha lokugqitywa, kukulinganisa uvavanyo, tsiba ukuthandabuza ukuba bekungekho ndlela, ukukhusela isixhobo sisetyenziswa kwakhona ngaphandle kokujija nokubetha, qaphela ukuba oomatshini abajikelezayo kunye nezixhobo kunye nebhatyi entle.
3. Ibhatyi kufuneka ikhethe ubungakanani obuchanekileyo, ukuba kufunyenwe ukuba ayingqukuva okanye ayinxitywanga ibiyiyo, iya kubangela ukuba ibhatyi ibe yinto yesiqhelo kwaye ichaneke izixhobo zokuthambisa, ngoko nangoko buyisela ibhatyi eneenkcukacha zesitayile, thintela isixhobo sokuphatha phantsi kwe isantya sokujikeleza okungcangcazelayo, ukubhabha okanye ukophula imeko eyingozi.
4. Isixhobo esilawula ufakelo siya kungqinelana nemigaqo ye-EU. Umzekelo, ububanzi be-12.7mm shand yobunzulu bokubopha kufuneka buye kuthi ga kwi-24mm, ukugcina uxinzelelo kwishafti kufanelekile. Bonisa njengomfanekiso omnye. Njengomfanekiso:
5. Ukumisela ngokukhawuleza:
Ububanzi obukhulu bezixhobo kufuneka zibekwe ngokuhambelana nale tachometer ilandelayo kwaye ngokuthe chu, kwaye kugcinwe ukukhuthazwa kwesantya esifanayo, hayi ukuyeka ukukhuthaza isenzo kwinkqubo yokusika. Bonisa njengasezantsi:
Izantya zomzila eziphakanyisiweyo
Ububanzi be-Bit Isantya esiphezulu
1 (25mm) 24,000RPM
I-2-1 / 4 "-2-1 / 2" (55-65mm) 16,000RPM
3 "-3-1 / 2" (75-90mm) I-12,000RPM
6. Xa umsiki engacacanga, buyisela isixhobo esitsha, ungaqhubeki usisebenzisa ukuthintela ukwaphuka kwesixhobo kunye neengozi zeshishini.
7. Nceda ukhethe iblade inde kunezinto zomsebenzi xa usebenzisa isixhobo, esinjenge: i-groove yokugaya ubunzulu be-12.7mm, sebenzisa ubude be-25.4mm ye-blade cutter, kuthintele ukusebenzisa i-12.7mm okanye ngaphantsi kwe-12.7mm izixhobo zokusika.
8. Xa inkqubo yokusebenza, sebenzisa iiglasi zokhuseleko zokunxiba, ukutyhala kukhuseleko, xa usebenzisa oomatshini be desktop kunye nezixhobo kufuneka wenze isixhobo, thintela izinto zomsebenzi usebenzisa isixhobo esikhuselayo, ukunqanda ingozi yezinto zomsebenzi kwiRally yesantya esiphezulu ukusika.
Ixesha Post: Jan-13-2021
Idilesi: Igumbi lokubonisa eli-1, iLunjiao Woodworking Machinery City, iShunDe District, iSixeko saseFoShan, kwiPhondo laseGuangdong, eChina.
Log Log-rip umatshini wabona
Lego multi - blade wabona wabona t ...
Ungayikhetha njani iblade ukuze isebenze
1. Jonga iwelding yeblade yesarha. ...
Isixhobo sokuphatha amanyathelo okhuseleko: 1. Arden to ...
Cnc Machine Izixhobo, Izixhobo zikaRobin Wood, IsiCwangciso seKhabhinethi sezixhobo zeKhabhinethi, IKhabhinethi yesixhobo somthi, Cnc Bits, Iibhodi zendlela ze-CNC,